Catheter na tubes Tubelọ Ọrụ | China Catheter na tube Manufacturers, Suppliers
EC ISO Medical Tụkwasịnụ Medical Grade ịkwanyere mmiri Catheter
A na-eji catheter na-amịpụta sputum na nzuzo na akụkụ iku ume. A na-eji catheter ahụ etinyere ozugbo na akpịrị ma ọ bụ site na eriri tracheal etinyere maka ọgwụ nhụjuanya
Medical Supply Urethral Balloon Medical Disposable Silicone ntekwasa Latex Foley nwoke Catheter na Water obere akpa
A na-eji Latex foley catheter eme ihe na ngalaba urology, ọgwụ dị n'ime, ịwa ahụ, obstetrics, na gynecology maka drainage nke mmamịrị na ọgwụ.
Disposable Medical ịkwanyere afo Nri tube na OA Asambodo
Ngwunye nri bụ ngwaọrụ ahụike eji eji enye nri ndị ọrịa na - enweghị ike ịnweta ọnụ site na ọnụ, na - enweghị ike ilo ihe ọ bụla, ma ọ bụ chọọ mgbakwunye nri. Ọnọdụ nke inye nri site na tube nri ka ana-akpọ gavage, nri anụ ahụ ma ọ bụ nri tube.
Disposable inyeaka Flatulence Medical ọnọde Enema Rectal Tubes Catheter
Mere nke na-abụghị egbu egbu ọgwụ ọkwa PVC, uzo, mgbanwe, DEHP-FREE bụ nhọrọ
Agba-nzobe maka mfe size njirimara.
Tube ogologo: 34.5cm ma ọ bụ ogologo nwere ike ahaziri site na ndị ahịa chọrọ.
Ebumnuche ma ọ bụ Miri dị elu dị
Agba agba oroma, Red, Yellow, Purple, Blue, Pink, Green, Black, Blue, Emerald, Light Blue. EC akara.
EC ISO Disposable Medical Nasal Oxygen Cannula Tube / Catheter
The Oxygen Cannula nke Nasal bụ ngwaọrụ Oxygen na-ebugharị ya na ọwa abụọ, A na-eji ya iji nyefee onye ọrịa ma ọ bụ onye chọrọ oxygen ọzọ.
A na-eme Cannula nke Nasal site na PVC na ahụike, mejupụtara njikọ, ọkpọkọ njikọta ozi, njikọta ọwa atọ, clip, alaka ejikọtara alaka, oghere imi.
Disposable Endortracheal tube na Cuff
Igwe akpịrị akpịrị bụ tube na-agbanwe agbanwe nke a na-etinye n'ọnụ ya n'ime trachea (windpipe) iji nyere onye ọrịa ume iku ume. Ejikọtara eriri endotracheal na ventilashị, nke na-ebunye oxygen na ngụgụ. A na-akpọ usoro ịtinye ọkpọkọ ahụ endotracheal intubation. A ka na-ele tube endotracheal anya ka ngwaọrụ 'ọkọlọtọ ọla edo' maka ịchekwa na ichekwa ikuku.
Medical Disposable ọnọde Icu kpụ ọkụ n'ọnụ Critical Care tube Emechiela Mmiri System Catheter
Emechibidoro mmiri usoro bụ ihe dị elu Emechibidoro mmiri System.
Emere ya na aka nchekwa iji kewapụ nje ndị dị n'ime ya ma nyere ndị na-elekọta ha aka izere ibute ọrịa.
Imewe ventilashị nke otu oge ga-enye nkasi obi nke ndị ọrịa ịmịkọrọ mmiri n’enweghị ikuku ikuku.
CVC Disposable Medical Supply Anesthesia Icu kpụ ọkụ n'ọnụ Critical Care Central Venous Catheter
The Central Venous Catheters (CVC) bụ ndị na-enweghị atụ, ndị na-eji naanị polyurethane catheters e mere iji kwado usoro ọgwụgwọ infusion na gburugburu nlekọta dị oke mkpa. Ha dị na ọtụtụ nhazi lumen, ogologo, French na Gauge nha. Otutu ndi di iche iche di iche iche di iche iche na-enye ihe di iche iche di iche iche maka ogwu ogwu, nlekota oru na ihe nlere. Ejiri CVC jikọtara ya na akụrụngwa na ngwa maka ntinye na Seldinger. Emebere ngwaahịa niile site na ethylene oxide.